Ny CNaPS no tompon’antoka tamin’ny fikarakarana ny fiofanana satria tanjona ny hanomezana fiahiana ara-tsosialy tsy miangatra ho an’ny rehetra. Naharitra 3 andro ny hetsika izay natao tao amin’ny hôtel Manga Lodge Vatomandry. Nisy ny fanatevenana ireo izay efa fantatry ny rehetra toy ny fisotroan-dronono. Nohazavaina antsipirihany ihany koa ny dingana arahina rehefa hanao fangatahana, ireo karazana fanampiana azon’ny fianakaviana sy ny fanampiana omen’ny CNaPS ny mpiasa raha sanatria ka tra-doza am-perinasa na voan’ny aretina. Ny fanampiana rehetra eo anivon’ny CNaPS moa dia hanaovana fangatahana avokoa. Efa misy ny taratasy alaina maimaimpoana sy fenoina fotsiny eny amin’ny masoivohon’ny CNaPS manerana ny Nosy. Misy ny tsy nahay nameno azy ireny ka natoro nandritra ny fiofanana miaraka amin’ny zavatra hafa tsara ho fantatra toy ny fanambarana momba ny karama tsy maintsy ataon’ny mpampiasa isan-telo volana, ohatra.